Onye isi nke OnePlus na-ekerịta njiri mara nke OnePlus 7 | Gam akporosis
OnePlus CEO Pete Lau kesara akpa teaser nke OnePlus 7. Ọ na-ekwu na ọkọlọtọ ọhụrụ bụ "Ngwa ngwa na ezigbo."
The teaser adịghị ekpughe ọtụtụ, ma gosi otu akụkụ nke ekwentị. O nwere ike ịbụ OnePlus 7 Pro ebe ọ bụ na ihuenyo ahụ gbagọrọ agbagọ, ọ bụ ezie na enweghị nkọwa banyere nke a. You nwere ike ịhụ ya n'okpuru.
OnePlus ga-ebido ụdị atọ nke ọkọlọtọ ya na-esote. A kọọrọ OnePlus 7 n'onwe ya na ọ nwere ihuenyo dị larịị, ebe usoro Pro ga-abịa na nnukwu ihuenyo a na-atụgharị. Modeldị ọzọ nke ga-eme ihe atọ a ga-abụ a mbipute na njikọta 5G.
Obi dị gị ụtọ ịkekọrịta ngwaahịa na-esote site na OnePlus ga-ewepụta oge ọhụụ nke Ọsọ na Ọfụma Karịsịa Ezigbo! Ezigbo bụ ihe ịma aka karịa Fast - ezigbo ule nke ngwaike na ngwanrọ.
Ngwaahịa ọhụrụ ahụ dị mma - enweghị m ike ichere ka ị hụ ya! ? ✨ pic.twitter.com/yPU9sEbeIv
- Pete Lau (@ nnetezie2007) April 17, 2019
Mgbe OnePlus ejidesiwo ike njiri mara njirimara mobiles ndị a, onye na-atụ egwu agbafuola nkọwa ndị ọzọ gbasara Onye na-abịanụ OnePlus 7 Pro.
User Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) kpughere tweet (nke dị n'okpuru) banyere ụdị Pro nke akọwapụtara nke ọma na ọ ga-enwe ihu igwe QuadHD +. Nke a ga - abụ mkpebi kachasị elu na ngwaọrụ OnePlus. Nchịkọta ahụ ga-abụ Super AMOLED ma nwee ọnụego ume 90Hz, dabere na nkwụsị ahụ. Eleghi anya "Soft" na Pete Lau's tweet na-ezo aka na nke a.
Okwesiri ighota na otutu igwe nwere ugwo ume nke 60Hz. Uzo ume ohuru di elu putara na ihe mmeghari na mmekorita n’ozuzu ga adi nma. Nke a nwere ike ịbụ atụmatụ OnePlus nwere oke ọkụ n'obi igosi.
Nanị n'ihi @IGIHE! Detailsfọdụ nkọwa banyere OnePlus 7 Pro:
-Quad HD + Super AMOLED "90hz" Ngosipụta
-WARP Charge na 30W, Batrị 4000mAH
-Okwu na-ekwu okwu
Ntọala Igwefoto atọ (Oghere Na Telephoto)
More na:https://t.co/MGRIRUzeo5#OnePlus7Pro #OnePlus7
- Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) April 17, 2019
Akwụkwọ ozi ahụ kwukwara nke ahụ Onye OnePlus 7 Pro ga-enwe ese foto okpukpu atọ Ha gụnyere igwefoto dị obosara yana igwefoto telephoto maka mbugharị. N'aka nke ya, ọ ga-akwadebe okwu okwu stereo, nkwado maka USB 3.1 na batrị 4,000 mAh na Warp Charge 30 teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa.
Igwefoto agbapụta na azụ azụ nke atọ nke OnePlus 7 na-enwu gbaa ọzọ maka ụlọ ha
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịmata ezinụlọ ọhụrụ a nke ngwaọrụ ndị sitere na akara el Mee 14, nke bụ mgbe a ga-ewepụta ya. OnePlus akwadoghị ya, mana isi mmalite na-egosi nke a bụ ezigbo ntụkwasị obi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » OnePlus CEO na-ekerịta onye ọrụ OnePlus 7 teaser